8x18 Podcast: The iPhone, Consumer Reports MacBook Pro, na Apple Accesskwụ Paygwọ Access | Esi m mac
8 × 18 Podcast: Ekwentị iPhone, Consumer Reports MacBook Pro, na Apple Pay Accessibility
Anyị bụ ndị n'ihu ihe nke abụọ nke oge a nke #PodcastApple Izu a anyị kwurula banyere ọtụtụ isiokwu gbasara Apple na ngwaahịa ya, mana ihe anyị kwurịtara banyere ya bụ doro anya asịrị banyere iPhone 8 ọhụrụ Apple ga-akwadebe maka anyị, ntụgharị nke Akụkọ Ndị Ahịa na nnwale obodo ya. MacBook Pro Late 2016 na Nweta na ngwaọrụ iOS na mbata Apple Pay na Spain. Obi abụọ adịghị ya na ihe omume na-atọ ụtọ kemgbe ndị otu pọdkastị ahụ, ndị na-ege ya ntị na ugbu a, ị nwere ike ịnụ uru ọ na-ewetara ndị mmadụ dịka @emadrida na ndị ibe ya kpuru ìsì kwa ụbọchị.
Eziokwu bụ na anyị nọ n'ebe dịtụ anya site na ihe Apple nwere ike iwetara anyị na ụdị iPhone ọhụrụ ya, mana ndị nyocha na usoro mgbasa ozi ndị ọzọ ga-ahapụrịrị akụkọ ha gbasara ihe ọ nwere ike ma ọ bụ ghara iweta ọhụrụ 8th ncheta iPhone XNUMX. Ndi Apple kwụrụ ụgwọ ndị ahịa ahịa ka ọ gbanwee echiche ya banyere ikike nke MacBook Pros? Nwere onwe nke 2016 MacBook Pro ọ dị mma ugbu a? Ndị a bụ isiokwu ndị ọzọ anyị kwuru maka ya n’abalị ụnyaahụ. N'ikpeazụ na imecha apụ Podcast n'abalị, anyị na-agwụ na sensations na uru niile Emi nwetarala na Apple Pay ruo Spen.
Cheta na oge nke asatọ a nke pọdkastị na-enye ndị niile chọrọ ịhụ anyị ibi site na YouTube ọwa niile Apple ha nwere ike ịme ya ma kwuo ihe ha chọrọ ozugbo. Na mgbakwunye na nke a na-agbakwunye ụda na ozugbo ọwa anyị na iTunes, nke mere na ndị niile chọrọ ịnụ anyị ebe ọ bụla na ngwaọrụ gị. Gị anyị na-akwado ka ị denye aha na iTunes nke mere na a ga-ebudata usoro ihe omume na akpaghị aka ma nwee ike igwu ha n'oge ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » 8 × 18 Podcast: Ekwentị iPhone, Consumer Reports MacBook Pro, na Apple Pay Accessibility
Onu ogugu Apple kariri onu ogugu ha na 2015
Nzuzo, ọhụrụ free ọzọ ka 1Password